व्यायामले शरीरमा रसायन उत्पन्न गर्छ, जसले रोग प्रतिरोध क्षमता बढाउँछः डा. पौड्याल
ब्रिटेनको युनिभर्सिटी अफ बर्मिङ्घममा क्लिनिकल फार्मेसी विषयका सिनियर लेक्चरर डा. विभु पौड्याल इन्टरन्यास्नल जर्नल अफ क्लिनिकल फार्मेसीका उपसम्पादक पनि हुन् । युरोपियन सोसाइटी अफ क्लिनिकल फार्मेसी रिसर्च कमिटिका अध्यक्ष पनि रहेका पौड्याल औषधि प्रयोग सम्बन्धि अनुसन्धानका विशेषज्ञ पनि हुन्। उनीसँग हामीले कोरोना भाइरसको संक्रमण र सम्भाव्य उपचारको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका थियौं। यो कुराकानी नेपाल पत्रकार महासंघ युके शाखाको कोरोना भाइरससम्बन्धी सचेतना अभियानअन्तर्गत तयार पारिएको हो ।
यो नयाँ भाइरल संक्रमण हो। यो नयाँ स्ट्रेनको भाइरस हो । कुनै पनि नयाँ औषधि बजारमा ल्याउन १०–१५ वर्षको समय लाग्छ । यो नयाँ रोग भएकाले सबै नियामक प्रक्रिया छिटो गर्दा पनि नयाँ औषधि आउन कम्तिमा ५ वर्ष र भ्याक्सिन आउन कम्तीमा १८ महिना लाग्नेछ ।
डब्लुएचओ, एनएचएस इंगल्याण्ड, अन्तर्राष्ट्रिय गाइडलाइन्स अनुसार अहिलेको परामर्शअनुसार जरो र दुखाइ कम गर्नका लागि प्यारासिटामोल खानु पर्छ । वयस्क बिरामीको लागि ५०० एमजी २ पटक, ६– ६ घन्टाको अन्तरमा खानु पर्छ । तर त्यो भन्दा बढी लिनु हुँदैन । बढी लियो भने खतरा हुन सक्छ। खोकीको औषधि, कागती र मह, नुन पानीले गलगल गर्ने, पानी टन्न पिउने, स्वस्थ खाने कुरा खाने, पिसाब पहेंलो हुन नदिने, एक्लै बस्ने। अरु भाइरल संक्रमण जस्तो हेपाटाइटिस, एचआइभीको उपचार अहिले सम्भव छ, तर एउटा भाइरसको औषधिले अरुलाई काम गर्दैन। तर कोरोना भाइरसको औषधि विकास गर्ने प्रारम्भिक नतिजा चाहीं त्यति भरपर्दो आएको छैन।
कुनै पनि कम्पनीको प्याटेन्ट २० वर्षको लागि हुन्छ । त्यसमध्ये औषधि विकास गर्नै ८–१० वर्ष लाग्छ । त्यसैले मूल्य पनि महँगो हुन्छ । तर डब्लुएचओ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहकार्य भयो भने सस्तोमा औषधि उपलब्ध हुन सक्छ । अहिले एचआइभीको औषधि त्यसरी नै सस्तो भएको हो ।
शरीरको प्रतिरोध क्षमता बढाउन के के गर्न सकिन्छ ? के घर भित्र बस्नु नै उत्तम उपाय हो ?
हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोध क्षमता बढाउन शारीरिक तन्दुरुस्ती जरुरी छ । शारीरिक व्यायाम विस्तारै शुरु गरेर बढाउँदै जानु पर्छ। बगैंचामा काम गर्ने, योग, ध्यान, व्यायाम गर्ने र सबैभन्दा जरुरी पानी र अन्य तरल पदार्थ पिउने गर्नु पर्दछ । व्यायाम गर्दा शरीरले एक किसिमको रसायन उत्पन्न गर्छ जसले रोग प्रतिरोध क्षमता बढाउँछ । बेलायतमा अहिले दिनमा एकपटक व्यायाम गर्न बाहिर जान पाइन्छ, तर सोसल डिसट्यान्सिँग पालना गर्नु पर्छ । अहिलेकै लागि चाहिं घरमै बस्नु र यो भाइरसबाट जोगिनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ।
नेपालजस्ता मुलुकहरुले कोरोना संक्रमणसंग जुध्न के तयारी गर्नु पर्ला ?
नेपालमा अहिले पनि स्वास्थ्य सेवामा मानिसहरुको पहुँच कम छ । नेपाल सरकारको तत्परता सह्राहनीय छ। देश भित्र र अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा रोक्नु राम्रो कदम हो । अब स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरुलाई तयारी अवस्थामा राख्नु पर्छ। त्यस्तै सेना, प्रहरी, स्वयम्सेवा क्षेत्रलाई तयारी अवस्थामा राख्नु पर्छ । यसबाहेक सपोर्टिभ थेरापी जस्तै अक्सिजन, औषधिहरु, आइसोलेशन वार्ड तयार गरौँ, स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सुरक्षित राखौं। नेपालमा जनशक्ति कम छ, अरु समस्या थपिन सक्छन् । हामी नेपालीहरु सामाजिक जीवन (सोसल लाइफ) मा धनी छौं। तर अहिलेको जस्तो समयमा छर छिमेकमा जाने, पूजा–आजामा जाने, भिडभाड गर्न बन्द गर्नु पर्छ । अहिले आफुले आफैलाई निगरानी गर्ने समय हो। यसमा सरकार र स्वास्थ्य संस्थाहरु मात्रै हैन, सर्वसाधारण सबैको योगदान त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । संक्रमण फैलन नदिन आइसोलेशन र क्वारन्टिन गर्नु पर्छ, ढिला गर्नु हुँदैन ।
डा. विभु पौड्याल